The main ibhasi esiteshini Rostov-on-Don. Ucingo Bus Rostov
Okwamanje, kuze iningi ezindaweni ezinabantu yezwe engafinyelelwa kwi zindlela ukhululekile futhi fast kwezithuthi ezifana ibhasi, uma kuziwa nokuxhumana nabantu abakude.
Bus - izindlela ukhululekile futhi ukonga yezokuthutha
kubalulekile ikakhulu ijubane futhi kalula: ikhambo lapho wenza yebhizinisi noma izintaba emizileni. Ngaphezu kwalokho, Akuyona imfihlo ukuthi uhambo oluya kude ezokuthutha - a engabizi kusukela iphuzu zezimali umbono, indlela ukunyakaza ngokukhululekile.
Uma sihlaziya isheduli indiza, wahlukana sebhasi of Southern Federal District of inhlokodolobha - Rostov-on-Don, kuba sobala ukuthi izinzuzo abagcini lapho: ibhasi kwamadolobha ngokuvamile zazitholakala nemizana akude kakhulu futhi imizana, lapho indiza noma ukuqeqesha ukufinyelela engenakwenzeka.
Kwenqwaba sithwala abantu sezimoto ithatha phezu main samabhasi e Rostov-on-Don, okuyinto waqala ukusebenza ngo-1978.
Kuze kube manje - lokhu ingenye isikhungo ebaluleke kakhulu futhi enkulu yezokuthutha yezakhamuzi Russian. Nsuku zonke ku iphinifa yakhe wathumela cishe angamakhulu amane izindiza.
The main ibhasi esiteshini Rostov-on-Don sise avenue Sivers, 1. Vele phambi kuba ukwakhiwa esiteshini sesitimela "Rostov-abakhulu."
Bus okungewakho JSC "Donavtovokzal". Into sinendawo elula eduze nenkaba yedolobha. Yingakho izivakashi kakhulu luhlala lapha.
Esinjani izifunda Russian oda amathikithi ezikhungweni zamabhayisikobho "Donavtovokzala"? Okokuqala, kuba Kuban futhi laseStavropol ke Volgograd, Astrakhan futhi Voronezh izifunda, kanye, yebo, eMoscow Petersburg. Ngaphezu kwalokho, kukhona imizila eya Moldova, Ukraine, Northern eCaucasus.
The main ibhasi esiteshini Rostov-on-Don uhlukile ukubukeka yalo yayenziwe, kusukela eziyinkimbinkimbi kuhlanganisa izakhiwo ezimbili ngesikhathi esisodwa: abagibeli nje amakamelo nehhotela umbhoshongo ukulinda.
Abagibeli kumele sikhumbule njalo ukuthi sokuhlelwa efanele uhambo lwakho, kumelwe wazi kusengaphambili isheduli indiza, ekuphathweni okuqhubekayo "Donavtovokzal". Ngakho-ke ngeke ukwazi ukuthenga amathikithi kusenesikhathi ngesikhathi izinkomba ezithakazelisayo. Awazi kanjani ukubhuka amathikithi inthanethi? Awunawo umqondo ngalokho engxenyeni ethile edolobheni main samabhasi e Rostov-on-Don? Ungathanda ukwazi ngqo indiza schedule? Kulula kabi. Vakashela ingosi esemthethweni esiphathiswa at donavto.ru bese uthola izimpendulo kuyo yonke imibuzo engenhla.
Nge ekhaya kwezidingo
Awunayo isikhathi ngokwakho ukuya main samabhasi e Rostov futhi ukuthenga amathikithi? Lenkinga ibuye ixazululwe. Namuhla, kunamabandla eziningi izinkampani ukuthi isinyathelo abaxhumanisi phakathi kwabantu umgibeli kanye yenethiwekhi.
Sicela uxhumane omunye wabo, futhi akusadingeki bahlanganyele ukuthengwa amathikithi. Abasebenzi uzokwenza konke ngawe, ukuya main samabhasi e Rostov, uthole ithikithi futhi, okubaluleke kakhulu, mathupha abalethe ekhaya lakho. Kahle kahle, lokhu kusebenza nemizila kuya nokusuka eMoscow.
Yiqiniso, akubona bonke abagibeli ezingaba nethuba ukukhokhela kwemisebenzi yokulamula. Yini ongayenza ukweluleka? Yiqiniso, ukuze ukwazi ukuthenga amathikithi e-indlela classical, okungukuthi ukuxhumana edeskini usizo ukuze uthole okunye indiza amasheduli futhi uthathe indawo yemali.
Ngokuqinisekile, abantu abaningi hamba nsuku zonke futhi efika main samabhasi e Rostov-on-Don. Uyithola kanjani kuye, ngiyazi, ngeshwa, akuzona zonke.
Sikugcizelele waphinda ukuthi into ngenhla sinendawo elula. Iseduze ezokuthutha zomphakathi "Inhloko w / sesitimela", lapho ukwenza Sibona stop inombolo 9 ibhasi inombolo 126, 7a, 85, inombolo ibhasi 7. Ukusebenzisa lezi izindlela zokuhamba, ungathola esikhumulweni sezindiza futhi emuva.
Isiteshi sebhasi ( "Rostov-Chief") ngocingo nophenyo service simi ngale ndlela: (863) 205-41-41. Shayela kule nombolo - futhi umsebenzi ibhasi uzokutshela isikhathi esiqondile sokufika noma ukuhamba amabhasi, umsebenzi amatafula umbuso kanye neminye imininingwane ebalulekile ezihlobene uhambo.
Namuhla, bambalwa abantu ngeke ebekela yokuthi thina echaza Terminal (Rostov-on-Don) - main ezokuthutha ihabhu eningizimu yezwe, njengoba abantu samaholidi beze lapha yonke iRussia ke ukuya ukuphumula ogwini Black Sea. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sasehlobo, nesibalo esikhulu izivakashi zithuthelekela eCrimea.
Uma sikhuluma izinzuzo ibhasi esiteshini eyinhloko Southern Federal District yenhloko-dolobha, into yokuqala ukuthi abambe iso lakho uma uvakashela - kuba lounge ezinkulu futhi ivulekile, esemgwaqweni esitezi sesibili. Kuyaphawuleka ukuthi ensimini JSC "Donavtovokzala" kukhona yokupaka enkulu amabhasi.
Ngu nebubi, mhlawumbe, ukuthi lalotshwa yokuthi uma umuntu engafuni nginikeze imithwalo yakho endaweni eydijithali, ekhokhwa, it is ophoqelelwe izitebhisi baphathe into. Futhi, ungathandi bonke abagibeli, esikhathini kusuka 23,00 kuya 6.00 akuyona ngemuva, okuyinto kudala ezinye ngokuphazamisa ukusebenza.
Kufanele kugcizelelwe ukuthi main samabhasi e Rostov-on-Don kungesilo kuphela edolobheni. Kunenye, esemgwaqweni at ul. Sholokhov, indlu 126. Ivame ukubizwa ngokuthi "ubudala." Ngokuyinhloko, ilwela lwabagibeli. Ibanga phakathi iziteshi ezimbili ngebhasi cishe amakhilomitha ayisishiyagalolunye. Ngemva komunye amakhilomitha amabili kukhona isakhiwo kwesikhumulo sezindiza Rostov, kuleli kheli elilandelayo: ul. Sholokhov, 270/1.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Izibuyekezo abagibeli ibhasi esiteshini main e Rostov kuyadida kakhulu. Abaningi weneliseka yokuthi ungaya ezindaweni ezahlukene Russia. Nokho, ingxenye enkulu abagibeli badumala futhi izinga lenkonzo njalo efaneleyo okusezingeni eliphezulu abashayeli emigwaqeni.
Noma Keyvdayving Umgede Diving.
YePeloponnese sidilizwa: Greek nhlonhlo ezikhangayo
Kanjani ukusuka ePrague eMunich?
Indawo yokudlela "Sehr Gut" Nizhny Novgorod: ikheli, incazelo, imenyu, ukubuyekezwa
Indlela yokwandisa isikrini kwikhompyutha ephathekayo ngokushesha, ngokuphumelelayo nangenzuzo?
Indlela ukubamba ungumqambimanga: amathiphu
I Benelux amazwe: Belgium, Netherlands, eLuxemburg. Izikhangibavakashi Benelux
Map M. (Taro): Inani incazelo